7 plugins oo bilaash ah si loo dhamaystiro sawirkeena | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Sawirro, Khayraadka
In kasta oo tartanka weyn ee Adobe portent uu helayey, haddana aaladda ugu badan ee la isticmaalay weli waa Photoshop. Khabiir badan iyo adeegsadeyaal cusub ayaa u jeesanaya barnaamijka loogu magac daray dhammaantood. Tani waxay sidoo kale sabab u tahay xaddiga fiidiyowyada iyo casharrada halkaas ka jira, oo ka bilaabanaya soo degsashada barnaamijka kumbuyuutarrada dibedda ah. Taasi waxay ka dhigeysaa barnaamij tartan badan oo anshax kasta oo naqshadeyn ah.
Iyo in kastoo Photoshop uu yahay aalad leh awood weyn naqshadeynta, waxaa jira waxyaabo kuxiran oo dhameystiraya. Taasina waa in qaar ka mid ah qalabkani ay ku siin doonaan ilo sida sawirro, qaabab, iwm. Astaamahani waxay bixiyaan fursado ballaaran oo ballaaran. Ku darso plugins-yada waxay bixiyaan hab deg deg ah oo lagu dheereeyo Photoshop si waqtigaaga kuu badbaadiyo. Maxay ka fiican tahay sida loo sameeyo waxyaabaha soo socda ee bilaashka ah.
1 Getty Images
2 Khad ama Dhadhan
3 Ururinta Nik
4 Sawir Qaade Virtual
5 sumadda siman
7 ON1 Raadka 10.5
Dhammaan naqshadeeyayaasha waxay u baahan yihiin sawirro muuqaal ahMaxaan isku xadidaynaa? Kuxiradan Getty Images Adiga ayay ku raadineysaa waxayna sifeeysaa sawirro aad u baahan tahay. Intaa waxaa dheer, codsigani uma shaqeynayo oo keliya Photoshop, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Sawirka iyo InDesign. Marka mashruucaaga oo dhan la dhammeeyo oo diyaar u yahay helitaanka oggolaanshaha macaamiisha waxaan heli karnaa ruqsad sawir oo xallin sare leh. Sidan ayaan u ilaalin doonnaa sawiradeena shaqo socod wanaagsan.
Khad ama Dhadhan
Ka naqshadeeyayaal ahaan waxaan u qaadaneynaa in qof kasta oo soo gudbiya shaqo uu fahmi doono si fiican. Marka, haddii aan u shaqeyno horumariye, waxaan aaminsanahay inay fahmi doonaan mashruuceena ugu dambayntiina waxay noqon doontaa sida aan dooneyno. Laakiin waxaan ilaawnaa in horumariyayaashu aysan ahayn inay fahmaan shaqadeena. Sidayada oo kale, ma fahmin sida ay u horumarto. Malo yarida ayaa mararka qaar keenta wax soo saar hore oo aan sax ahayn oo sidii la filayay uma socoto. Khadku waa dhammaystir taasi waxay kaa caawinaysaa inaad bixiso macluumaad muhiim ah oo dheeri ah oo ku saabsan jeesjeesyada adiga oo diiwaangeliya lakabyadaada, laga soo bilaabo qaab qorista illaa saamaynta iyo qaababka cabbirka.
Fursado badan oo loogu talagalay sawir qaadayaasha ayaa lagu soo daray Nik Collection, taasi waa sababta ay ugu jirto tan sare. Laakiin xitaa intaa ka sii badan tan iyo markii la helay Google. tan iyo markii hore kuma habooneen qodobkan qiimaha 95 doolar. Maanta, mahadsanid shirkadda Google, waa lacag la’aan. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay, in shirkadda baadi goobka ay oggolaatay inay ku wareejiso ururinta DxO si loo hubiyo horumarka sii socda.. URL-ka soo degsashada cusub ayaa noqon doona nikcollection.dxo.com laakiin wali waa suurtagal in kuwaan la soo galiyo google.com/nikcollection xiligaan.
Sawir Qaade Virtual
Haddii aad tahay naqshadeeye si deg deg ah, ama wali aadan hubin inaad isticmaasho Photoshop si loo abuuro sawirro qaabaysan, sawir qaade waa hab dhakhso leh oo wax ku ool ah oo lagu helo muuqaallo casri ah xawaare buuxa. Fursadaha fudud ee riix-iyo-horay-u-socodku waxay ka dhigan tahay inaad si deg deg ah wax uga beddeli doonto farshaxankaaga isha, in kasta oo ay tani xaqiiqdi tahay inay waxtar badan u leedahay bilowga Photoshop-ka marka loo eego kuwa khibrada u leh.
Bogga astaanta muhiimka ah wuxuu leeyahay kordhin dheeraad ah Adobe. Waxaan horeyba u ognahay inay si wada jir ah ulashaqeeyaan sawirka iyo baaxadda weyn ee Freepik, sidaas darteed kheyraadku kamaqnaan doono. FlatIcon waa keyd weyn oo kumanaan kumbuyuutar oo dulinka vektorka bilaashka ah oo aad ku soo dejisan karto qaab SVG, PSD, ama PNG ah. Qalabkan Photoshop-ka ah ee bilaashka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh u hesho dhammaan astaamaha adigoon ka tagin deegaankaaga shaqada, adoo si toos ah ugu gelinaya nashqaddaada guddi.
Adiga oo ka shaqeynaya dhammaan xirmooyinka 'Creative Suite', fiiladan Shutterstock waxay si toos ah uga helaysaa arjiga illaa sawirro kala duwan oo laga heli karo maktabadda Shutterstock. Ka dhex raadi Photoshop, guji si aad u xulato oo aad u geliso, iyo liisanka tooska ah ee hawl socodka fudud. Runtii way caawinaysaa haddii aan u isticmaalno sawirro bilaash ah naqshadaheenna.
ON1 Raadka 10.5
Tani waa kiis kale oo ah sida dalabku waa bilaash ka dib qiimo aad u sarreeya. isha! Kama hadleyno mudnaanta, laakiin ka tagida 60 euro ilaa eber waa isbedel muhiim ah. Qalab waxtar leh si loo helo saameyn deg deg ah sawirka. Ha noqoto midab daaweyn, ku darida maqaarka iyo buuqa, ama geesaha hal abuurka ah.
Waxaa jira kuwo kale oo badan, laakiin in badan oo iyaga ka mid ah ayaa leh kharash, oo u dhexeyn kara € 15 ilaa € 200. Hadda, waxaad haysataa wax yar oo aad ka doorato bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 7 plugins oo bilaash ah si loo dhamaystiro sawirkeena
Damian Martin G. dijo
Waad salaaman tahay, maxay u leedahay in NIK Collection uu lacag la’aan yahay haddii ay tahay tijaabo 30 maalmood ah oo keliya?
Jawaab Damian Martin G
5 astaamo oo wali ka badbaadaya isbedelka